Mmepụta ursodeoxycholic acid site na iji usoro enzyme nke ndu karịa usoro kemịkalụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara edozila nsogbu nke nchedo gburugburu ebe obibi na arụmọrụ nke ndị ahịa anyị Changde Yungang Biotechnology Co., Ltd., nke meziwanye ihe mkpụrụ na ogo mma, belata. ọnụ ahịa mmepụta ihe ma nwekwuo uru akụ na ụba. Emeela oru ngo a.
Companylọ ọrụ anyị enyochaala usoro teknụzụ ọhụrụ maka ịpụ, na-asacha ma na-egbochi nchebe enzyme site na nje ndị mepụtara mkpụrụ ndụ, na-atọ ntọala ntọala siri ike maka njikọ nke ursodeoxycholic acid site na usoro enzymatic. Ihe ndia bu ihe ndi a.
1. Na nke mbụ, a na-etinye enzyme UD n'usoro ursodeoxycholic acid. Ngwakọta nke enzymatic nke ursodeoxycholic acid bụ nke chepụtara site na iji ya na nke gara aga. Thezọ akụkụ ọkara nwere uru nke usoro dị mfe, arụmọrụ dị elu na nchedo gburugburu .;
2. Site na iji onye nkuzi ọhụrụ, chọpụta ọnọdụ gbaa ụka nke ọma iji nweta mkpụrụ enzyme dị elu site na ịmụ usoro ịgba ụka;
3. Direct nchịkọta nke enzymes nje maka mmepụta, na-eme ka mmịpụta ahụ dị ọcha na usoro ọcha nke enzyme, na ịchekwa ọrụ nke enzyme ahụ na arụmọrụ kachasị.